Doogee S95 Pro waa rasmi: Ogow dhammaan astaamaheeda | Androidsis
Magaca Shiinaha Doogee wuxuu go'aansaday inuu soo saaro Cusbooneysiinta S90 lagu muujiyey Shirweynihii Dunida ee Mobile-ka 2019 ee Barcelona. Astaamaheeda waxaa ka mid ah inay awood u siiso inay kordhiso shaqeynta iyadoo lagu saleynayo qaybo isku dhafan sida aaladaha Motorola qaarkood, wax loo baahan yahay haddii aad rabto inaad sida ugu badan uga faa'iideysato
El Doogee S95 Pro Waxay leedahay qiimeyn IP69K ah, boodh caadi ah iyo caabbinta biyaha, nadiifinta cadaadiska sare ee 80 ° ee biyaha lagu tuuro taleefanka. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, kama maqna kala soocida MIL-STD-810G. Waxay leedahay cabbirro ah 13.8 mm oo miisaankeedu yahay 285 garaam, waa shey ku milma faa'iidooyin muhiim ah.
Waxyaabaha laga iibsado taleefanka agtiisa waxaa ka mid ah 3.500 mAh batteriga dibedda, aad ayey muhiim ugu tahay haddii aan nolol ku filan ka sameyno bannaanka, tan iyo taleefanka ayaa ku xiraya 5.150 mAh. Xirfadlayaashu waxay adeegsadaan birlab, iyagoo ku xiraya shabakad biinano ah. S95 Pro adag waxaa lagu soo oogi karaa 24W (12V / 2A) iyada oo loo marayo USB-C.
Shirkaddu ma aysan dooneynin inay sameyso iyada oo aan la hadlin sidoo kale, waxay bilaabeysaa mid 6W ah oo leh batari 2.000 mAh waana lagu xiri karaa iyada oo loo marayo Bluetooth. Waxay ku timaaddaa taageerada terminal markaad rabto inaad taageerto oo aad ugu raaxaysato si raaxo leh.
2 Qiimaha Doogee S95 Pro
El Doogee S95 Pro wuxuu yimid MediaTek Helio P90 SoC, 8GB oo RAM ah, warshad Android 9 Pie ah oo la cusbooneysiin karo Android 10 toddobaadyada soo socda. Kaydinta waa 128 GB UFS 2.0, laakiin kiiskan kordhintu waa beddel kale oo ah ugu badnaan 256 GB iyada oo loo marayo booska MicroSD.
Qalabkani wuxuu ku raaxaystaa shaashadda 6.3 "1080p IPS LCD" oo leh saamiga 18: 9. Doogee wuxuu go’aansaday inuu hirgeliyo Gorilla Glass 4. Kameradda ugu weyn waa 582 MP Sony IMX48 sensor si loogu duubo fiidiyowga 4K ee 30 FPS, agtiisa waxaa ku aragnaa kamarad 8 MP ah oo aad u ballaaran iyo 8 MP aaladda qotada dheer. Kaamirada sawir qaadaha waa 16 MP waxayna leedahay muraayad 80 ° ah.
Qiimaha Doogee S95 Pro
Doogee S95 Pro hadda waxaa lagu heli karaa 337 euro kaliya telefoonka. Haddii aan go'aansano inaan iibsanno taleefanka, sameecadda iyo baakidhka baateriga ee dibadda wuxuu ku kacayaa qiyaastii 430 yuuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Doogee S95 Pro waa rasmi: Ogow dhammaan astaamaheeda
Kuwa aan caadiga ahayn, MOBA oo ka socda Netease, waxay u timaadaa Android si ay isugu muujiso mid ka mid ah khadka tooska ah ee sanadka
Warface: Hawlgallada Caalamiga ah ee hadda la heli karo, cusub oo bilaash ah oo loogu talagalay loogu talagalay Android